Thwebula Audacity 2.3.3 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Audacity
Ukuchwensa – umhleli ethandwa umsindo iqoqo elikhulu imisebenzi. Isofthiwe bakghone ukurekhoda umsindo bukhoma kusuka microphone, USB noma Firewire izingcingo ezisekela amarekhodi imizila nokuphatha ezidingekayo amazinga evolumu. Ukuchwensa kwenza ukususa umsindo omkhulu ovela ngemuva, silwe ukukhwehlela noma ukububula, nokulinganisa jikelele level umsindo futhi balahle ezinye yokulimala ekwakhiweni ukuqopha kusukela audio ukusakaza noma umsindo amadivayisi. Isofthiwe ine isethi enkulu amathuluzi ukuze uhlele bese ukuhlanganisa amafayela umsindo. Futhi ukuchwensa ikuvumela ukuba ukuxhuma anezele ezihlukahlukene ukuze sithuthukise umsebenzi nge amafayela alalelwayo.
Uloba umsindo emithonjeni ehlukahlukene
Ihlanganisa amafayela alalelwayo
processing ngesikhathi esisodwa amafayela amaningi
Ukususwa izici ngomsindo
Digitizes amarekhodi analog
Amazwana ku Audacity
Audacity software ehlobene
Ifomathi yeFomethi – isiguquli esisebenzayo samafayela we-multimedia. Isoftware ikuvumela ukuthi uguqule amafayela ahlukahlukene abe amafomethi athandwayo ekhompyutha namadivayisi aphathekayo.
I-Mp3DirectCut – isihleli somsindo esilula ukusebenza namafayela we-MP3. Isoftware ifaka amathuluzi wokucindezela amathrekhi womsindo ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi.
IGuitar Pro – isoftware yokusebenza ngamakhibhodi, umoya kanye nezinsimbi zomculo. Isoftware isebenzisa ubuchwepheshe bemisindo enengqondo kunazo zonke yamathuluzi.
I-TuneFab Apple Music Converter – isiguquli se-iTunes semidiya esekela amafomethi ahlukahlukene futhi ikuvumela ukuba ulande umculo nohlu lwadlalwayo lonke, kufaka phakathi ama-audiobooks avela ku-iTunes nakwaqondakala ngaphandle kwe-DRM.
I-KakaoTalk – isoftware yokuxhumana ngezwi nangombhalo nabanye abasebenzisi. Isoftware inika amandla ukusetha iphasiwedi yokufinyelela nokuxoxa nokulungiselela ibhokisi lengxoxo ngezidingo zomsebenzisi.